I-Apple ibhiyozela iVeki yeKhowudi ye-EU ngeeNkqubo zokuSebenza zaSimahla | IPhone iindaba
U-Apple ubhiyozela iVeki yeKhowudi ye-EU ngeeseshoni zenkqubo yasimahla
Abafana abavela eCupertino bayaqhubeka nombono wokufundisa inkqubo kuye nabani na ofuna ukufunda kwaye yiyo loo nto ukongeza kwizifundo eziqhelekileyo ezenziwa kwivenkile yeApple, bongeza iindlela zokufunda kwiiDyunivesithi, ezikolweni nakwezinye iiseshoni zenkqubo yasimahla yabo bonke abafuna ukuqala kwaye ngoku iVeki yeKhowudi ye-EU.
Ngokusengqiqweni, ikamva leApple lixhomekeke ikakhulu kuyo kunye nomzamo abawenzayo ukubonisa wonke umntu ukuba kulula kangakanani kwinkqubo kubonakala. Okwangoku iApple ineenkqubo zokufunda ezahlukeneyo ezinikwa abantwana kwiiNkampu zeHlabathi kwiVenkile yeApple, kodwa ngoku I-Apple ifuna ukubonelela ngaphezulu kweeseshoni zeenkqubo ezingama-6.000 kulo lonke elaseYurophu kunyaka olandelayo njengenxalenye yanamhlanje kwiApple shows.
I-Apple ibhengeze ngokusesikweni ukuba iya kubonelela ngamakhulu eeseshoni zenkqubo kwiiVenkile zeApple kwiYurophu iphela ngeVeki yeKhowudi ye-EU. Eli nyathelo leKhomishini yaseYurophu liza kwenzeka Oktobha 7 ukuya ku-22 Ngenjongo yokubhiyozela ukubaluleka kweenkqubo kunye nokunceda abantu bayo yonke iminyaka ukuba bazise izimvo zabo ebomini ngekhowudi.
Ulwimi lwetekhnoloji yinkqubo. Kwaye sikholelwa ekubeni ukufunda kwinkqubo sisakhono esisiseko. Ngoba? Kungenxa yokuba ikufundisa ukusombulula iingxaki kunye nokusebenza neqela ngendlela yoyilo. Inokukunceda uyile ii -apps ezinakho ukwenza ukuba izimvo zakho zizaliseke. Kuya kufuneka sonke sibe nethuba lokwenza into enokutshintsha umhlaba. Kungenxa yoko le nto siphuhlise inkqubo evumela nabani na ukuba afunde kwaye afundise inkqubo.
UTim Cook ngokwakhe uyacacisa Kwiphepha losasazo elisemthethweni:
Siyakholelwa ukuba inkqubo lulwimi lwekamva kwaye wonke umntu kufuneka abe nethuba lokuyifunda. Senze ukhetho lwezixhobo zasimahla kunye neziyila kakhulu ezenza ukuba ufikeleleko kwaye lube mnandi kuye wonke umntu. Siyazi ukuba itekhnoloji inokuba nefuthe elihle kubomi babantu kwaye inike uluntu amathuba.
Ngoku ezi zifundo zijolise kubo bonke abantu bayo yonke iminyaka ziya kuba nokubakho xa kunokwenzeka, iiseshoni ezinje ngo “Qalisa inkqubo","Ixesha lokudlala: ILabyrinth kaSphero"Kwaye"Inkqubo yeRobot eneSwift Playgrounds ", zezinye zeekhosi ezisetyenziswayo namhlanje kwaye eziza kubona ukwanda kweentsuku ezizayo ngolu hlobo lwenyathelo.
Kuqikelelwa ukuba kukho i-1,36 yezigidi zemisebenzi enxulumene noqoqosho lwe-iOS kwilizwekazi. UKUYAI-pple ihlawule kufutshane ne- $ 18 yezigidigidi kubaphuhlisi baseYurophu okoko kwasungulwa iVenkile yeApp. UApple wazisa indawo yokudlala eSwift kunye nekharityhulamu ye- "Coding for Everyone" ngo-2016. Zombini ziyafumaneka simahla, kwaye injongo yabo kukuphinda bafundise ukufaka iikhowudi ukwenza kube lula kwaye konwatyiswe wonke umntu. Bonke abo banomdla banokufumana iiseshoni zenkqubo ngaphakathi kwivenkile yeApple ngokuthe ngqo ngokufikelela imicimbi.codeweek.eu y apple.com/es/today.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » U-Apple ubhiyozela iVeki yeKhowudi ye-EU ngeeseshoni zenkqubo yasimahla
I-Apple Music iveza itreyila yencwadi ebhaliweyo yeBang! Ibali likaBert Berns
I-Sonos iya kudibanisa i-AirPlay 2 kunye ne-Siri kwizithethi zayo